Holmes ရဲ့စိတ်ကူးသေတ္တာ | Holmbygden.se
သငျသညျအကောင်းတစ်စိတ်ကူးရှိသည် Do – ကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့?
ဒါဟာသင်ပိုသွက် Holmes ကျေးလက်သို့မဟုတ်အခြားပညာရှိအထောက်အကူပြုနိုင်ထင်တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်. ကိုသာစိတ်ကူးစိတ်သန်းကန့်သတ်…
အတူတူကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာပိုပြီးကောင်းသောစိတ်ကူးများများမှာ. ဤနေရာတွင်ပေးစိတ်ကူးများ may ဥပမာ. ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Holmes အပေါ်အမျိုးမျိုးသောအစည်းအဝေးများများအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြု – သငျသညျပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလား. ဒါဟာအစ HBU ညာဘက်အပေါ်ကို fix သို့မဟုတ် bounce နိုင်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောနိုင်ပါတယ်. ဘာပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့, အဘယ်သူမျှမအဆိုပြုချက်ကိုလည်းမိုက်မဲဖြစ်ပါသည်!
အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းညာဖက်ပေါ်မှာငါတို့ပုံစံကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်. ပုံးထဲမှာဖြည့်ပါနဲ့ပေးပို့, ရှင်းလင်းသော! သင်သည်မည်သည့်ဖိုင်ပူးတွဲကျေးဇူးပြုပြီးမလား, သင့်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုမှစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံတစ်ခုကိုလည်းကောင်းလှ၏.
ဒါဟာဖို့လည်းဖြစ်နိုင် ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ကိုက်ညီလျှင်: info@holmbygden.se.
Vill du kanske bara vara kontaktbar för Holmbygden.se (#ShepherdsHut), ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်နှင့်အတူအပြင်အမည်မသိလည်းကောင်းလှ၏. ဒါကြောင့်ဆိုပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရေးရန် “ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေး”. ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်ကူး Send.
တွင်2(လိုအပ်ခဲ့လျှင်ပုံစံအကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုသုံးပါ):
Strax norr om Mosj&ou... ဆက်ဖတ်ရန်